Nampanantena Ny Hetsika Fa Hiverina Indray Hitaky Ny Fitaterana Maimaimpoana Ao São Paulo Amin’ny Faran’ny Volana Febroary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2016 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny Română , Français, Español, Português
Mpanao fihetsiketsehana manoloana ny Lapan'ny tanànan'i São Paulo. Saingy tsy tonga hifampiresaka na ny Ben'ny Tanàna na ny Governora. Saripika Agência Democratize, nahazoana alalana.
Nanambara ny Movimento Passe Livre (MPL, amin'ny teny portiogey manao hoe “Hetsika ho amin'ny fitaterana maimaimpoana”) fa tsy ho tanterahina alohan'ny 25 febroary ny hetsika manaraka anoherana ny fampakarana ny saram-pitateran'ny bus sy ny métro ao São Paulo. Tonga izany fanapahankevitra izany noho ny tsy fahazoana olona, zara raha nihoatra ny 300, notontosaina tamin'ny 28 janoary, fandraisana anjaran'ny olona vitsy indrindra hatramin'ny nanombohan'ny taona.
Maneho hevitra ny sampam-baovao Agência Democratize, izay nandrakitra ny vaovao teny an-kianja :
Ho an'ny mpikambana sasany ao amin'ny hetsika, ny hevitra dia ny handray an-tanana ny raharaha hatrany amin'ny fakany miaraka amin'izay mety ho mpiara-miombon'antoka, sy ny handefa araka izay tratra ny fampahafantarana hanomanana fihetsiketsehana lehibe ahafahana manome aina vao indray ny hetsika ataon'izy ireo. Izay no fomba fiasa vaovaon'ny hetsika izay, rehefa tsy nahazo ny fampidinana ny saran-dalana tamin'ny voalohan'ny taona, dia lasa resy tosika ka nanjavona tanteraka tsy hita teny an'arabe tamin'ny taona 2015. Manomboka eto [28 janoary] ka hatramin'ny 25 febroary anefa dia manomana hetsika sasantsasany ny MPL toy ny fanakanana ny lalana an-tanandehibe sy ny fanomanana adihevitra momba ny fitateram-bahoaka.
Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny faha-28 teo anoloan'ny Lapan'ny tanànan'i São Paulo io ry zareo dia nanantena fa hanaiky hifampiresaka amin-dry zareo ny Ben'ny Tanàna Fernando Haddad sy ny Governora Geraldo Alckmin, saingy tsy nitranga izany. Laura Vianna, mpikatroka iray, nanambara tamin'ny Rede Brasil Atual hoe : « Teny an-dalambe izahay nandritra ny efatra herinandro ary ny fifampiresahana tokana mba nataon'ny fahefam-panjakana taminay tao amin'ny prefektioran'ny polisy dia niompana tamin'ny lalana izoran'ny fihetsiketsehana ».
Noho ny tsy fahatongavan'ny mpitondra na ny solontenany, dia nisy ny fanomanana fihaonana teo amin'ny mpikambana sy i Lúcio Gregori, sekreteram-panjakana teo aloha misahana ny fitanteram-bahoaka nandritra ny governemantan'i Erundina (Ben'ny Tanànan'i São Paulo avy ao amin'ny Antokon'ny Mpiasa nanomboka ny 1989 ka hatramin'ny 1992).
Iray tamin'ny mpandrafitra ny tetikasan-tsarandalana ho maimaimpoana tao São Paulo izay tsy nety ho tontosa i Gregori. Nandritra io fihaonana io izy nanome voninahitra ny MPL tamin'ny nahafahany nametraka ny fitateram-bahoaka ho zo ara-tsosialy eo anatin'ny adihevitra ataon'ny vahoaka ao Brezila. Ny Movimento Passe Livre, izay niorina tamin'ny taona 2002, dia mitaky ny hanaovana maimaimpoana ny fitateram-bahoaka ao amin'ny tanandehibe breziliana.